Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.9 milyan xagga kaabayaasha ballaadhinta miyiga - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 2.9 milyan xagga kaabayaasha ballaadhinta miyiga
Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 2.9 milyan xagga kaabayaasha ballaadhinta miyiga
Degmooyinka Jefferson, Klickitat, Mason, Skagit, Snohomish iyo Whitman ayaa rajaynaya inay kobciyaan horumarka dhaqaalaha iyada oo loo marayo marin ballaadhan oo loogu talagalay adeegga xawaaraha sare, marin-u-furan ee ballaadhinta.
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu oggolaaday $ 2,816,649 deyn dulsaar yar iyo deeqo loogu talagalay kaabayaasha dadweynaha si loo bixiyo adeeg xawaare sare leh, marin-u-furan furan, iyo $ 150,000 oo deeqo ah oo loogu talagalay daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuur.
Mashaariicda loogu talagalay Degmada Jefferson PUD # 1, magaalada Goldendale, Mason County PUD # 3, Port of Skagit County, magaalada Darrington, iyo Port of Whitman County ayaa ka faa'iideysan doona lacagaha lagu bixiyay barnaamijka cusub ee ballaadhinta miyiga ee Washington.
Maalgelinta CERB waxaa la jaan qaadaya in ka badan $ 4.5 milyan oo ilaha maxalliga ah.
Degmada Jefferson - $ 50,000 deeq ah Degmada Jefferson PUD # 1 loogu talagalay Qorshaha ballaarinta Kaabayaasha Isboortiga ee Degmada Jefferson. Mashruucan barnaamijka qorshayntu wuxuu ka kooban yahay daraasad suurtagal ah si loo sahamiyo ballaadhinta iskuxirka masaafada-iyo-mayl ee ugu dambaysa dadka deegaanka iyo ganacsiyada gobolka oo dhan. Sanduuqa CERB waxaa la barbar dhigay $ 17,000 oo ah ilaha maxalliga ah.
Degmada Klickitat - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Goldendale ee loogu talagalay Qorshaha Ballaaran ee Goldendale. Mashruucan barnaamijka qorshayntu wuxuu ka kooban yahay daraasad suurtagal ah si loo abuuro qorshe ballaadhinta ballaadhinta ballaadhan oo ay ku jiraan falanqaynta farqiga, dib u eegista qorshaha dhammaystiran iyo cusboonaysiinta aagagga la xiriira, iyo qalabka GIS. Sanduuqa CERB waxaa la barbar dhigay $ 17,000 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Mason - $ 408,325 oo amaah ah iyo $ 408,324 oo deeq ah Degmada Mason PUD # 3 loogu talagalay Ballaarinta Fiber Baadiyaha Baadiyaha Miyiga ee Degmada Mason. Mashruucan barnaamijka balaaran-ballaadhku wuxuu ka kooban yahay dhisid iyo fidinta marin-u-furan isku-xidhka shabakadaha fiber-ka ee lix bulshooyinka reer miyiga ah ee aan la adeegsan ee Degmadda Mason. Lacagta CERB waxaa la jaanqaaday $ 150,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Skagit - $ 500,000 oo deyn ah iyo $ 500,000 oo deeq ah Dakadda Gobolka Skagit loogu talagalay Skagit Bulshada Fibre Optic. Mashruucan barnaamijka ballaadhinta miyiga wuxuu ka kooban yahay dhismaha qaybta 6 ee laf-dhabarta ballaaran ee gobolka, oo isku xireysa Magaalada Concrete iyo barta laf-dhabarka ee Magaalada Hamilton. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 2.3 milyan oo ilaha maxalliga ah.
Degmada Snohomish - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Darrington Xarunta Sahaminta Kheyraadka Dhaqanka ee Xarunta Hal-abuurka Qoryaha. Mashruucan barnaamij qorshayntu wuxuu ka kooban yahay sahan dhaqameed dhaqameed si loogu taageero qorshaha Xarunta Innovation Wood, oo ay ku jiraan naqshad hordhac ah, injineernimo, iyo oggolaansho. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 85,000 ilaha maxalliga ah.
Degmada Whitman - $ 750,000 oo deyn ah iyo $ 250,000 oo deeq ah Dekedda Gobolka Whitman loogu talagalay mashruuca Dhismaha Xilliga-Mile Fiber. Mashruucan barnaamijka ballaadhinta miyiga wuxuu ka kooban yahay dhismaha fiber-ka hawada sare ee baalayaasha jira ilaa shan beelood oo reer miyi ah oo ka tirsan Degmada Whitman. Lacagta CERB waxaa la jaanqaaday $ 2 milyan oo ilaha maxalliga ah.
"Maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee miisaanka balaaran ee miyiga waa qeyb aasaasi u ah koritaanka bulshada," ayuu yiri Gudoomiyaha CERB Randy Hayden. Maalgelinta Barnaamijka Baadiyaha Baadiyaha Miyiga Cusub wuxuu muhiim u yahay xoojinta dhaqaalaha gobolladaan iyadoo loo furayo fursado cusub muwaadiniinta, ganacsiyada, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo dowladaha hoose. ”
Brian Bonlender, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, ayaa yidhi: "Runtii shaqo kasta iyo fursad kasta oo dhaqaale maanta waxay u baahan tahay helitaanka adeegyo ballaadhan. Meesha qof ku nool yaanu noqonin qodob go'aamiya himilooyinka waxbarasho, riyooyin ganacsi ama daryeel caafimaad oo tayo leh. Lacagtaan maanta la shaaciyey waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha iyo xoojinta bulshooyinka reer miyiga iyo qabaa'ilka ah ee ku baahsan gobolkeenna.
Siideynta lacagaha CERB ee mashaariicdan waxay kuxirantahay codsade kasta oo dhameystira shuruudaha qandaraaska kahor, sida dhameystirka ilaha kale ee maalgalinta iyo helitaanka rukhsadaha lagama maarmaanka ah.
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 163 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 35,000 oo shaqo, iyo maalgashi raasumaal oo gaar loo leeyahay oo ah $ 5.6 bilyan ($ 34 illaa $ 1) oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyin waaxyo gaar loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha.
Ka baro wax badan oo ku saabsan CERB at www.commerce.wa.gov/cerb.
Degmada Jefferson PUD # 1: Will O'Donnell, maareeyaha isgaarsiinta, (360) 385-8369, wodonnell@jeffpud.org
Magaalada Goldendale: Larry Bellamy, maamulaha magaalada, (509) 773-3771, lbellamy@ci.goldendale.wa.us
Degmada Mason PUD # 3: Justin Holzgrove, isgaarsiinta & maareeyaha xiriirka bulshada, (360) 432-5323, justinh@masonpud3.org
Dekedda Skagit County: Sara Young, agaasimaha qorsheynta iyo tas-hiilaadka, maareeyaha garoonka, (360) 757-0011, sara@portofskagit.com
Magaalada Darrington: - Dianne Allen, karraaniga-khasnajiga, (360) 436-1131, dinne.allen@darringtonwa.us
Dekedda Gobolka Whitman: Kara Riebold, oo ah sarkaalka hawlgalka, (509) 397-3791, kara@portwhitman.com
← Grant wuxuu caawiyaa AIM Aerospace balaarinta Pierce iyo King Degmooyinka U dabaal degaya aasaaska Xeerka Tirtirka Kufsiga Xabsiga 15 sano ka hor →